#Madagascar : Ahoana ny zon’ny mpandeha an-tongotra ? | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Ahoana ny zon’ny mpandeha an-tongotra ?
Publié le 29 octobre 2012 par Lalana
Tato ho ato ny talen’ny pôlisim-pirenena dia nampahatsiahy ny tokony hanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ary nampitandrina fa tsy misy ankanavaka fa izay tratra dia hiaran’ny sazy.
Nasiany fitenenana manokana ireo mpitaingina môtô tsy manao aroloha tamin’izay noho ireo loza nihatra tamin’izy ireny. Nanao ezaka tokoa ny pôlisy ka maro no voasakana indrindra ireo mpitaingina môtô tsy manao aroloha. Izay sendra ireo pôlisy dia tsy nisy afa-maina na ireo namany aza. Pôlisy telo lahy nitondra môtô tsy nanao aroloha no tratra ary niharan’ny sazy avy hatrany ary nalaina ny taratasiny hoy ny tatitra avy ao amin’ny pôlisy. Tsy ny môtô ihany anefa fa ny mpitondra fiara koa. Hentitra ny fepetra raisina amin’ireo mpitondra fiara tsy manaofehikibo aroloza, miresaka amin’ny finday eo am-pamiliana, mametraka zaza eo anoloana sy ny sisa. Maromaro ihany koa ny taxibe no voasava eny an-dalana, ka efa tsy dia sahy mampiditra mpandeha intsony rehefa feno ny fiara, indrindra rehefa fantatra fa hisy pôlisy ao alohaloha ao.
Tsara koa ny nampahatsiahy fa efa misy ora voafetra ny handehanan’ireo sarety sy posiposy mpitondra entana aty afovoan-tanàna ka izay tsy manaja izany dia tokony hiharan’ny lalàna ihany koa. Betsaka anefa ny ezaka mbola tokony hatao satria hita fa mihahenjana ny fifamoivoizana. Azo lazaina fa tsy milamina mihitsy izany nohon’ny habetsahan’ny fiara mifanahantsahana amin’ny isan’ny mpandeha tongotra.
Tokony asiana fiheverana ihany koa ny lalana ho an’ny mpandeha tongotra. Lasa vitsy dia vitsy sisa ary mihatery ny lalana izoran’ny mpandeha an-tongotra eto andrenivohitra satria ny lalana izay tokony hatokana andehanany feno mpivarotra sy fiara miantsona mandavanandro hany ka voatery midina mandeha anaty arabe izy ary matahotra fadiranovana hatrany ny ho voafaokan’ny fiara. Tsy mahagaga noho izany raha mihabetsaka ny lozam-pifamoivoizana. Tsy natao hiantsonan’ny fiara mihitsy ny "trottoirs".
Manaitra ireo tompon’andraikitra mba hijery akaiky io toe-javatra io ary handray fepetra mahomby satria tsy natao handefitra ny mpandeha tongotra fa raha natokana ho azy no antony nanamboarana ireny "trottoirs" ireny dia aleo mba ho azy tokoa. Rehefa misy loza mitranga mantsy dia lazaina fa misy fahadisoany satria izy mandeha anaty arabe kanefa ny "trottoirs" tsinona tsy misy andehanany.
Tsy tokony hotanana ve ny andraikitra ny CUA izay miadidy ny fandaminana ny tanàna sy ny filaminana eo amin’ny fiaraha-monina satria izy no nametraka ireny mpivarotra ireny ary mamela ireny fiara ireny hipetraka amin’ny lalan’ny mpandeha tongotra?